Android na akwụkwọ ahụ aja | Na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo | Gam akporosis
Hazie gam akporo gị kacha mma mobile na akwụkwọ ahụ aja na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo. Akwụkwọ ahụaja bụ otu n'ime ihe kachasị dị na gam akporo gị ma ha na-egosi igosi ihe omume ntụrụndụ gị, ụtọ ma ọ bụ gosipụta foto nke ndị ị hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ na ihe gam akporo akwụkwọ ahụaja dị ka mara mma dị ka o kwere, ebe a anyị na-egosi gị ọtụtụ haziri site na edemede.
1 Download gam akporo na akwụkwọ ahụ aja
2 Esi hazie ekwentị mkpanaaka gị na akwụkwọ ahụ aja Android
3 Esi gbanwee akwụkwọ ahụaja na gam akporo
4 Alternative usoro ịgbanwe wallpaper na gam akporo
Download gam akporo na akwụkwọ ahụ aja
Nwere ike tinye ihe ọ bụla oyiyi nke akwụkwọ ahụaja na android. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na anyị na-eme internet search, ọ dị mfe ịchọta ọtụtụ nke size ma ọ bụ otosịrị iru na-adịghị dị ka anyị na-atụ anya. Ọ bụrụ n’achọghị igbu oge, ịnwere ike ilebanye anya na ebe ngosi ihe oyiyi anyị site na ịga na njikọ ndị a:
Ndabere 18: 9
Anụmanụ na akwụkwọ ahụ aja
Anime na akwụkwọ ahụ aja
Egwuregwu na akwụkwọ ahụ aja
Ala ndi ama ama
Yi na akwụkwọ ahụ aja
Motor na akwụkwọ ahụ aja
Music na akwụkwọ ahụ aja
Kọmputa na teknụzụ na akwụkwọ ahụ aja
Landscape na akwụkwọ ahụ aja
Minions na akwụkwọ ahụ aja
Movie na akwụkwọ ahụ aja
Video egwuregwu na akwụkwọ ahụ aja
Christmas na akwụkwọ ahụ aja
Ego niile anakọtara na weebụsaịtị a bụ ihe ndị edemede ha dere. Anyị ghọtara na foto niile gosiri na androidsis.com Ha nọ na ngalaba ọha ma nwee ike ịchọta ha na Internetntanetị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, zitere anyị a email a ga-ewepụ ya na nchekwa data anyị ozugbo enwere ike ịkwanyere ikike nwebisiinka.
Esi hazie ekwentị mkpanaaka gị na akwụkwọ ahụ aja Android
Ọ bụ ezie na ngwaọrụ gam akporo anyị nwere ike ị nweta akwụkwọ ahụaja nke anyị ka masịrị, o yikarịrị ka anyị chọrọ iji ndabere ahaziri ma ọ bụ nke dabara na njirimara anyị. Ihe mbụ m na - eme ozugbo m bido ngwaọrụ, ọ bụrụ kọmputa, mbadamba, mkpanaaka ma ọ bụ ụdị eletrọniki ọ bụla nwere njirimara onye ọrụ, bụ itinye nzụlite na-amasị m karịa yana ọbụlagodi na kọmputa m na-eme ka ọ gbanwee n'oge awa ọ bụla. Ma,esi gbanwee akwụkwọ ahụaja na gam akporo?
Na ọnụ ọgụgụ nke nsụgharị dị iche iche nke gam akporo n'ebe ahụ, ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume ịkọwa usoro ziri ezi maka ngwaọrụ niile, mana anyị nwere ike ịkọwa ma tinye nseta ihuenyo nke otu esi eme ya na Nexus 5 na-agba ọsọ gam akporo 6.0.1. Anyị ga-akọwa ụzọ ụfọdụ ime nke a iji hụ na onye ọ bụla nwere ike ịgbanwe akwụkwọ ahụaja nke ngwaọrụ gam akporo ha, otu n'ime ha n'ụzọ abụọ dị iche iche iji kpuchie ụdị ngwaọrụ ndị ọzọ
Esi gbanwee akwụkwọ ahụaja na gam akporo
Usoro a dị mfe, mana anyị maara na ihe dịịrị ụfọdụ nfe nwere ike bụrụ ihe gbagwojuru anya maka ndị ọzọ, yabụ ana m aga n'ihu ịkọwa usoro ị ga - agbaso:
Anyị na-aga na «ihuenyo» ngalaba.
N'ime ihuenyo, anyị na-abanye «Akwụkwọ ahụaja». Na ụfọdụ ngwaọrụ, nhọrọ nwere ike ịpụta dị ka "Ndabere".
Na ngalaba na-esote anyị nwere ike ịhọrọ:
Chọọ na kaadị ebe nchekwa.
Ihe nkiri na akwụkwọ ahụ aja.
Ebe nchekwa foto.
Anyị na-abanye na ngalaba ebe ihe oyiyi anyị chọrọ iji mee ga-abụ ma anyị họrọ ya.
Tupu ịtọọ akwụkwọ ahụaja ọhụrụ, anyị nwere ike idezi ụfọdụ ụkpụrụ, dị ka ịkụda ihe oyiyi ahụ, ma ọ bụ ịtụgharị ya. Anyị na-edezi ya dịka anyị chọrọ.
N'ikpeazụ, anyị na-anabata.
Na ụfọdụ nsụgharị nke gam akporo, dị ka 4.4.2 Samsung TouchWiz, na nzọụkwụ 4 nhọrọ ịhọrọ ma anyị chọrọ itinye ya na ihuenyo ụlọ, na mkpọchi mkpọchi ma ọ bụ na ha abụọ ga-apụta ozugbo. Mgbe e mesịrị, anyị nwere ike igosi ebe ị ga-ewere onyonyo a site na eserese eserese eserese, na akwụkwọ ahụ aja ma ọ bụ gallery anyị. Ndị ọzọ yiri nke a kọwara.
Ọ bụrụ na ibudatara nnukwu foto, ebe a ka anyị na-akọwa esi gbanwee mkpebi nke foto n’ụzọ dị mfe.
Alternative usoro ịgbanwe wallpaper na gam akporo
Enwere ọzọ usoro nke bụ ihe mbụ m chere na ị kwesịrị ị na-agbalị n'agbanyeghị nke ụdị gam akporo ngwaọrụ i nwere. Ọ bụ maka iji ụzọ mkpirisi: site na ukwu ma ọ bụ ngwa ọ bụla (gụnyere onye nyocha faịlụ) nke na-echekwa ma ọ bụ nwee ike ịnweta ihe oyiyi ahụ. Iji gbanwee akwụkwọ ahụaja na usoro ọzọ a, anyị ga-eme ihe ndị a:
Anyị na-agagharị na onyonyo anyị chọrọ ịkọwa dị ka akwụkwọ ahụaja, nke nwere ike ịbanye na igwefoto, igwefoto, Foto Google ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị nwere ya.
Anyị na-emeghe ihe oyiyi.
Anyị pịa ma jide ruo mgbe anyị hụrụ nhọrọ ndị dịnụ.
Anyị na-ahọrọ «Set dị ka ...».
Anyị na-ahọrọ nhọrọ achọrọ n'etiti ndị na-egosi, dị ka:
Naanị na ihuenyo ụlọ.
Naanị na mkpọchi ihuenyo.
N'ebe obibi na n'ihu mkpọchi.
Dị ka ọ dị na usoro gara aga, anyị nwere ike idezi ihe na foto ahụ, dịka ịkpụ ya, buo ibu, wdg.
N'ikpeazụ, anyị na-anabata mgbanwe ahụ.
O kwere omume na ọ bụrụ na inwee obere ngwaọrụ, ịpị onyonyo maka nke abụọ anaghị egosi nhọrọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ nke gị, ị ga-edochi aka ahụ na onye ọzọ: metụ nhọrọ bọtịnụ nke ngwaọrụ gị. Dị ka ị maara, ọtụtụ ngwaọrụ gam akporo nwere bọtịnụ atọ: isi ma ọ bụ bọtịnụ mmalite, nke ga-alaghachi na nke atọ anyị ga-emetụ iji gosi anyị nhọrọ ndị dị. Nke ahụ bụ bọtịnụ ị ga-emetụ na nzọụkwụ 3 nke usoro gara aga.
Ebee ka ị ga-esi na akwụkwọ ahụ aja? Gwa anyị gbasara akụ gị mgbe ị na-ebudata akwụkwọ ahụaja na itinye akwụkwọ ahụ aja gam akporo ọhụụ, otu n'ime ihe kachasị mfe ma kachasị ọsọ iji nye ekwentị ma ọ bụ mbadamba anyị mgbanwe nke ọdịdị.